RASMI: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Liiska Musharixiinta Abaal Marinta Sanadka Ee Gooldhaliyaha, Khadka Dhexe, Difaaca Iyo Goolhaayaha Yurub Ugu Fiican Yurub Iyo Xidigaha Liiskan Ku Soo Baxay Oo Dhamaystiran. - GOOL24.NET
RASMI: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Liiska Musharixiinta Abaal Marinta Sanadka Ee Gooldhaliyaha, Khadka Dhexe, Difaaca Iyo Goolhaayaha Yurub Ugu Fiican Yurub Iyo Xidigaha Liiskan Ku Soo Baxay Oo Dhamaystiran.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa soo saaray liiska musharixiinta xidigaha u tartamaya abaal marinaha sanadkan 2018 ee boos kasta oo kubbada cagta ah. Liiska musharixiinta ay UEFA soo saartay ayaa ka kooban min saddex xidig oo boos kasta ku tartami doona iyada oo guulaystayaasha la abaal marin doono maalita August 30 markaas oo la samayn doono isku aadka UEFA Champions League heerkiisa groupyada.
Haddaba ka hor inta aan la gaadhin isku aadka heerka groupyada Champions League, UEFA ayaa ku dhawaaqday min saddexda ciyaartoy ee u tartami doona goolhayihii, difaacii, khadkii dhexe iyo waliba goolhayihii ugu fiicnaa ee xili ciyaareedkii la soo dhaafay ee 2017/18.
Aan ku bilawnee saddexda goolhaye ee iskugu soo hadhay musharaxnimada goolhayihii ugu fiicnaa Yurub xili ciyaareedkii la soo dhaafay waxaa ku soo wada baxay Alisson Becker oo AS Roma ka tirsnaa balse hadda Liverpool ku soo biiray, goolhayaha Real Madrid ee Keylor Navas iyo Buffon oo markaas ka tirsnaa Juventus balse hadda PSG ku biiray.
Codbixin kadib UEFA ayaa xaflada isku aadka Champions League ee magaalada Monaco ku abaal marin doonta goolhayaha codka ugu badan helaya iyada oo haddaba ay hore ka bilaami doonto codbixinta lagu soo kala xulanayaa.
Difaaca waxaa ku tartami doona saddex ciyaartoy oo Real Madrid ka wada tirsan iyada oo Sergio Ramos, Raphael Varane iyo Marcelo ay liiskan ku soo wada baxeen laakiin Varane ayaa haysta fursada ugu wayn maadaama oo uu koobka aduunka ku soo guulaystay iyada oo koobkii aduunka loo xisaabinayay xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Khadka dhexe waxaa ee xili ciyaareedkii la soo dhaafay Yurub ugu fiicnaa waxaa ku soo baxay isla markaana cod lagu kala saari doonaa Luka Modric iyo Toni Kroos oo Real Madrid ka wada tirsan iyo xidiga kooxda Man City ee Kevin De Brueyne.
Dhinaca weerarka waxaa kuwada jira Mohamed Salah oo soo qaatay xili ciyaareed layaableh, Cristiano Ronaldo oo xili ciyaareedkiisii ugu danbeeyay ee Madrid soo qaatay iyo waliba Lionel Messi iyada oo Mohamed Salah uu ka fursad wayn yahay xidigaha Messi iyo Ronaldo marka ay noqoto codbixintii la soo sameeyay ee UEFA intii lagu jiray xili ciyaareedkii dhamaaday.
Real Madrid ayaa ka koox ahaan ciyaartoyda ugu badan liiskan ku leh waxaana ugu ugu jira todoba ciyaartoy inkasta oo hadda Cristiano Ronaldo oo liiskan ku soo baxay uu Juventus ku biiray balse bandhiga uu musharixiintan ugu soo baxay waxa uu ku soo gaadhay Los Blancos.
Halkan kaga bogo Liiska Musharixiinta Abaal Marinaha Boos kasta ee UEFA Ay bixin Doonta August 30 marka la samaynayo isku aadka Champions League.
Saddexda Goolhaye Ee U Taagan Abaal Marinta Goolhayihii Ugu Fiicnaa Yurub 2017/18
1-Alisson Becker- AS Roma/Liverpool
2- Keylor Navas- Real Madrid
3- Buffon- Juventus/PSG
Saddexda Difaac Ee U Taagan Abaal Marinta Difaacii Ugu Fiicnaa Yurub 2017/18
1-Raphael Varane -Real Madrid
2- Sergio Ramos-Real Madrid
3- Marcelo-Real Madrid
Saddexda Khadka Dhexe Ee U Taagan Abaal Marinta Khadkii Dhexe Ugu Fiicnaa Yurub 2017/18
1- Luka Modric-Real Madrid
2- Kevin De Bruyne-Man City
3- Toni Kroos-Real Madrid
Saddexda Gooldhaliye Ee U Taagan Abaal Marinta Weeraryahankii Ugu Fiicnaa Yurub 2017/18
1- Mohamed Salah- Liverpool
2- Cristiano Ronaldo-Real Madrid/Juventus
3- Lionel Messi- Barcelona
Haddaba akhriste, xidigahee ayaad filaysaa in ay ku guulaysan doonaan abaal marinta goolhayaha, difaaca, khadka dhexe iyo waliba gool dhaliyihii Yurub ugu fiicnaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay ee 2017/18?.
FIFA waa tuugo wxana Ku bdan Africa naceeb kante miyaa u qalmin dhaxda kan ugu fcnaa bax dheh
MOHAA CADDE says:
Haa waa uu u qalmaa balse Yurub adunka waxa aay u necebtahay qarada Africa , sido kale ma ahin xitaa in aay jaceshahay qarada America waayo waad daremi jartaa marka laciyarayo koobka America ma helaan wax fasax ah sidaa darteed wad daremi kartaa nacebka aay u qabta . lkn wax aay isku soo sraan awoododa aanan marba qarsami karmin marka waxaa laga donayaa in hadii aan african nahay waa in aan isasoosaarnaa koley malin uun waaanu vuleysan doonaaa .
maxamuud gacamey says:
asc magaceyga waaa maxamuud Maxamed xuseen jooga jasiiradda malta goolhayaha uGu fiican naves khadka dhexe modric gool dhaliya cr7
asc maxamuud gacamey jooga jasiiradda malta goolhayaha waa naves khadka dhexe modric dhaliya cr7
Alisson, Varane, Modric and Mohamed Salah
MAXAMED AROON says:
Asc magacayga waa MAXAMED AROON w
Ogol Hayaga ugu fiican waa buffon dhexda ugu fiican modric gool dhaliyaha waa mid aan lagu murmi karinkarin waana Don.c RONALDO